भूकम्पले दियो राजकुमारलाई नयाँ जिवन - Hamrokhotang
Home » Cultural » भूकम्पले दियो राजकुमारलाई नयाँ जिवन
भूकम्पले दियो राजकुमारलाई नयाँ जिवन
साउन–१७, बैशाख १२, १३ र २९ गते गएको विनाशकारी महाभूकम्पका कारण कयौ आमाहरुका काख रित्तिए भने कति परिवारका छोराछोरीहरुले आफ्ना आमाबाबु तथा आमाबाबुले छोराछोरीहरुबाट सधाको लागी छुटिनु मात्र नभएर कयौ‌ छोरीचेलीहरुको सिउँदोको सिन्दुर समेत सधाको लागी पुछियो । विनाशकारी महाभूकम्पमा परि अन्य जिल्लाहरु जस्तै खोटाङमा पनि एक दर्जन भन्दा बढी मानिसहरुले अकालमा ज्यान गुमाउनु प¥यो । विनाशकारी महाभूकम्पले लाखौ–लाख नेपालीहरुको परिवारमा अाँशु नै आँशुको वर्षा गराएको छ । धेरै जसो मानिसहरुको मनमा अझै पनि भूकम्प भनेपछि आङनै झसङ्ग भएर नराम्रोसँग झस्कने गर्दछ ।
जिल्लाको दक्षिणी गाविस खोटाङबजार नौ कोटगाउँ निवासी राजकुमार फयलको परिवारको कथा विनाशकारी महाभूकम्पले ठीक उल्टो बनाइदिएको छ । महाभूकम्पमा परी राजकुमार फयलको परिवारले नत आँशुनै बगाउनु पर्‍यो नत पीडामानै पर्नुपर्‍यो । विनाशकारी महाभूकम्पले राजकुमारको परिवारमा आँशुको साटो खुसीनै खुसीको वर्षा गराउनुमात्र नभएर स्वयम् भगवाननै प्रकट भएजस्तो भयो राजकुमारको परिवारलाई । २००९ सालमा खोटाङबजार गाविस वडा नम्बर नौ कोटगाउँमा बाबु वेदनाथ फयल र आमा सावित्रा फयलको कोखबाट जन्मिएका कान्छा छोरा राजकुमार फयलले श्री भगवती उच्च माध्यमिक विद्यालबाट २०३२ सालमा टेस्टपास गर्नुभयो । पाँच भाई छोराहरुमध्ये राजकुमार कान्छा छोरा हुन् ।
बस्तुबाख्रालाई घाँस काट्ने क्रममा २०६८ साल मंसिर दुई गते घर नजिकको ओदालको रुखबाट लडेर कम्मर देखी उदो पुरै काम नलाग्नेगरी चल्न छाड्यो । यसले गर्दा लगभग चार वर्षीया अपाङ्ग जिवन बिताउनुप¥यो राजकुमारले । अपाङ्ग भएपछि आफन्त , साथिसङगीहरुसँग चार– चार वर्षसम्म नचाहाँदा नचाहाँदै छुटिएर बस्नु प¥यो उनले । आफ्नो पीडा सुनाउँदै राजकुमार फयल भन्छन् ‘ २०६८ सालमा रुखबाट लडेपछि ओछ््यानमा थन्कीएर बस्नुको पीडा सँगसँगै आफन्तजन तथा साथीसङ्गीहरुसँग चार वर्षसम्म परदेशी जीवन जस्तै सबै त्याग्नु प¥यो मैले । ओछ्यानमा बसिरहनु पर्दा कहिलेकाही मलाई यस्तो पनि लाग्थ्यो भन्दै राजकुमार भन्छन् मेरो भाग्य पनि कस्तो रहेछ ? आखिरमा अहिले आएर यो अवस्थामा पुग्नु रहेछ यो अवस्थामा पुगेर पलपलमा तड्पिएर मर्दै बाँच्नु भन्दा त बरु एकैपलमा मरेकै बेस किन म रुखबाट लडेको बेलामा नै मरिन ? जस्तो लाग्थ्यो राजकुमारलाई ।
तर यी राजकुमारका शव पिडाहरुलाई बैशाख १२,१३ र २९ गते गएको विनाशकारी शक्तिशाली महाभूकम्पले यसरी पखालेर लग्यो । भूकम्प जाँदा राजकुमार छोराको कोठामा गएका थिए । छोराले बोकेर झाँरेपछि जमिनसम्म पुग्दासम्म पनि भूकम्पले हल्लाईराखेको थियो । एकछिन पछि बाट भूकम्प जान छोड्यो छोडेपछि राजकुमारलाई आफ्नो शरीर हलुका भएजस्तो लाग्यो र नचल्नेलाई अब पुरै हिड्न सकिने रहेछ भन्ने लागेपछि चार वर्षपछि ससुराल समेत गईसकेको उनले बताए । राजकुमारका पलपलमा मर्दै बाँच्नु परेका पीडाहरु राजकुमारको जीवनमा कहिले पनि फर्किएर आएनन् । जसले गर्दा राजकुमारको परिवारमा खुसीयाली सँगसँगै राजकुमारलाई पनि नयाँ जिन्दगी दियो भूकम्पले ।
ओछ्यान भन्दा बाहेक अन्त कतै हिड्न समेत नसक्ने राजकुमार अहिले घरदेखी एक घण्टा लाग्ने छिनारे धाराको पानी विहान बेलुका ल्याउने, खाना पकाउने, बस्तुहरुलाई घाँस काट्ने मात्र नभएर जंगलबाट घाँस समेत काटेर ल्याउने गर्दछन् । सबैको घरमा पीडै पिडा मात्र भईरहेको अवस्थामा राजकुमारको परिवारमा भने खुसीनै खुसी छाएको छ । भूकम्पले आफुलाई नयाँ जिन्दगी प्रदान गरेको भन्दै राजकुमारले खुसी व्यक्त गरे ।